निर्देशक मैक्स जोसेफ "128 हृदय धड्कन प्रति मिनेट" को अल्ट्रा-आधुनिक शुरुआत, जसको समीक्षाहरु धेरै मिश्रित छन्, उनको सृष्टिकर्ता र केहि अभिनेताहरूको प्रतिभा को वास्तविक खोज भयो, तर सामूहिक श्रोताहरूमा विशेष असर नगर्ने।
"128 हृदय धड्कन प्रति मिनेट" को 96-मिनेट तस्वीर को साजिश को बारे मा यति उल्लेखनीय छ, जो प्रीमीयियर धेरै वेरिएटेड पछि समीक्षा गरे? यो अत्यन्त सरल छ: एक गैर-छोरो कथा, जुन प्रगतिशील मान्छेहरूको लागि डिजाइन गरिएको छ जुन संगीत र किशोरका साथमा आधारित छन्, 50% सफलता प्रदान गरेको छ। यसको अतिरिक्त, निर्देशक र निर्माताहरूले योजना अनुसार कार्य गरे र प्रासंगिक विषयको लागि एक साधारण बजेटको साथ गुणस्तर उत्पादन सिर्जना गर्न खोजे।
तस्वीरको केन्द्र डीजे कोले कार्टरको सफलता कथा हो, जो घाटीमा बस्छ, तर हलिवुड, प्रसिम, सफलता र विश्व नृत्य-प्लेटफार्मको सपना, जुन उनीहरूले चट्टान गर्न सक्नेछन्, उनीहरूको प्रतिभा र एक ट्र्याकमा धन्यवाद। बीचमा कोल नामको ठुलो केटाको कार्यालयमा काम गर्छ, जसले बैंकहरूमा उधारकर्ताहरूको समस्या समाधान गर्दछ। उहाँको खाली समय कोल र चार जना साथीहरूले आनन्द खोज्न र सपनाको खोजीमा पार्टनरहरूमा भेट्छन्।
यी पार्टी मध्ये एकमा, प्रतिभाशाली मान्छेले प्रसिद्ध डीजे जेम्सलाई भेट्छ, जसले पुरुषलाई पहिलो ट्रयाक सिर्जना गर्न निर्णय गर्दछ। अचानक कोल को सपना उनको भावना र उनको निर्माताको केटीबीच उत्पन्न भएको कारणले धम्की दिएको छ।
निर्देशक, अभिनेता र भूमिकाहरू
एक रोचक तथ्य यो छ कि तस्वीर मैक्स जोसेफ को लागि एक प्रकार को पहिलो शुरुआत भयो, जसमा न केवल स्क्रीनसेटर को रूप मा बल्कि निर्देशक को रूप मा पनि दिखाई दिए। नतिजाको रूपमा, "128 हृदय धड्कन प्रति मिनेट", जुन समीक्षाहरू फरक थिए, जोसेफको बहुमुखीता देखाइयो। यस फिल्मलाई आफ्नो खातामा अघि मात्र केही छोटो चलचित्रहरू थिए।
महत्वपूर्ण तथ्य यो थियो कि निर्देशक र निर्माताहरूले आफ्नो परियोजनामा विश्व स्तरको हस्तक्षेपहरू आकर्षित गर्न सके। चलचित्र "128 हृदय धड्कन प्रति मिनेट", अभिनेता र भूमिका जसको सिनेमा र दर्शकहरूको प्रशंसकहरूमा धेरै अस्पष्ट धारणा छोडिदिनुभयो र आलोचकहरूको लागी संसारको प्रतिभा Zak Zakron को नयाँ प्रतिभाको एक नयाँ पक्ष खोलियो।
जब आलोचकहरूले सुनेका थिए कि यो सुन्दर सुन्दर मुख्य भूमिकामा संलग्न थिए, तीमध्ये धेरैले तुरुन्तै निर्णय गरे कि सफलता सफलताको कम थियो, तर तिनीहरूले गल्ती गरे। संसारभरि, श्रोताहरुले गहिरो संगीत मलदरम "128 प्रति मिनेट दिल धड्कन" भेट्टाए। परियोजनामा अभिनेताहरू र भूमिकाहरू सावधानीपूर्वक निर्माताहरू र निर्देशकले सोचेका थिए।
मुख्य महिला भूमिका एमिली रटाकोवस्की को मोडेल द्वारा खेलेका थिए, जो पहिले देखि धेरै परियोजनाहरु मा भाग लेने को समय देखि पहिले, को सबै भन्दा महत्वपूर्ण को रोमांचकारी "निराश"। वेस बेंटले द्वारा निर्माताको भूमिका प्रदर्शन गरिएको थियो , उनले धेरै मात्रामा परियोजनामा भाग लिइन्। तस्वीरको बाँकी अभिनेताहरू युवा अभिनेताहरू छन्, एकदम सानो दर्शकहरूलाई चिनिन्छ।
फिल्म र आलोचकों को समीक्षा को प्रीमीयर
"128 प्रति मिनेट प्रति मिनेट", जुन समीक्षाहरू दर्शक र आलोचकहरू देखि भिन्न हुन्छन्, अगस्त 20, 2015 मा ठूला स्क्रिनहरूमा बाहिर आए। प्रीमियर हनोवुको ऐतिहासिक भागमा चिनियाँ थियेटरमा भएको थियो। प्रीमियरमा, निर्देशक आफैं बाहेक, त्यहाँ मुख्य अभिनेताहरू थिए: जक एफ्रोन र इमिली रटाकोवस्की।
सेलिब्रेटीहरूको ठूलो संख्यामा प्रिमिमेयरमा उपस्थित भएन, तैपनि तिनले प्रेसको ध्यान आकर्षित गरे। उनीहरूले घटनाको बारेमा लिखित गरेका थिए, उनीहरूले हलिवुड रिपोर्टरको प्रकाशनको आलोचनामा उल्लेख गरेका थिए, जसले हाम्रो समयको सबैभन्दा प्रत्याशित अभिनेत्री अफ्रनलाई बोलायो, जसले "संगीत हृदय धुन प्रति मिनेट" मा आफ्नो प्रतिभाको नयाँ भूमिका देखाउँथ्यो।
फिलिम गठन र सबैभन्दा प्रतिष्ठित विदेशी प्रकाशनहरु जस्तै रेटेड टमाटर, मेटाक्रिटिक र सिनेमाकोरकोर बारे समीक्षा। दर्शकहरूको मूल्याङ्कनमा आधारित, चित्रले दसवटा सम्भावना बिन्दुहरूको ठोस पाँच र सी + को स्थिति प्राप्त गर्यो।
"128 प्रति मिनेट बिट्स": दर्शकहरूबाट प्रतिक्रिया
सायद फिल्मको सफलताको मुख्य सूचक बक्स कार्यालयमा बक्स कार्यालय हो। यूएसमा, पहिलो सप्ताहांतमा एक संगीत नाटकले यसको सुन्तला बैंकमा लाखौं डलर प्राप्त गर्यो, र एक उत्पादनको लागि6मिलियन बजेटको साथ यो राम्रो सूचक हो। यद्यपि, यो ठूलो खजाना निराशा गर्न सम्भव थिएन, प्रायः सम्भवतः उनीहरूले गन्ती गरेनन्। कुल मिलाएर, मादोदोमा अमेरिकामा3करोड डलर र रूसमा $ 600,000 भन्दा बढी एकत्र गरियो।
दर्शक "प्रति मिनेट दिल धकेलिएको" प्रतिमा दर्शकहरूले अस्पष्ट पाएका छन्। युवा पीढ़ी, यो उत्कृष्ट कृति डिजाइन गरिएको थियो, यसलाई मनपर्यो, तर यसको आफ्नै नग्नता थियो। इलेक्ट्रोनिक संगीत बुझ्ने व्यक्तिहरूले महत्त्वपूर्ण टिप्पणीहरू गरे, यस तथ्यलाई ध्यान दिंदै कि यस्ता बिट्स प्रति मिनेट एक संगीत ट्र्याकको लागि सबैभन्दा सफल ताल होइन। अब यो व्यावहारिक रूपमा प्रयोग गरिएको छैन, यद्यपि यस दिशाको संस्कृतिको निर्माणको युगमा केवल डीजे द्वारा प्रयोग गरिएको थियो।
फिल्मको सामान्य प्रभावको रूपमा, अधिकांश दर्शकहरूले प्ल्याटको अधिकतम यथार्थवादलाई उल्लेख गरे, जसले निर्देशकलाई हासिल गर्न खोज्यो, र Efron र Bentley को शानदार खेल, तर Ratakovski अझै वास्तविक अभिनेत्रीबाट टाढा छ।
केही दर्शकहरू "128 बिट प्रति मिनेट" को चलचित्रमा टिप्पणी छोडेर, कहानीमा प्रेम कथा रेखाको कारण महत्त्वपूर्ण समीक्षाहरू लेखे। तिनीहरूले तथ्यलाई ध्यान दिए कि यसले तस्वीरलाई आधुनिक बनाउँछ। कुनै कुरा होइन कि निर्देशक कितना चाहानुहुन्छ, त्यो अझै पनि सिनेम्यागोग्राफी को सामान्य स्वीकृत डिब्बेहरु लाई फर्क्यो र लिपिमा एक रोचक स्थान को लागि रोमान्टिक रिश्तों को लागि एक महत्वपूर्ण स्थान ले। यो मुख्य क्यारेक्टरहरूको प्रेम त्रिकोण हो जुन सिनेमाहरू सिनेमाहरूमा आकर्षित गर्न "मलदर 128" प्रति मिनेट धारण गर्दछ। अभिनेताहरू, जसका समीक्षाहरू फरक थिए, उनीहरूलाई सौंपाएको कार्यको साथमा राखियो र उनीहरूको सपना पछ्याउन यस तस्वीरको मुख्य सन्देश सुचारु गर्न सफल भयो।
सृष्टिकर्ताहरू र अभिनेताहरू: जेक स्नाइडरको "निस्क्रिय रिसेप्शन"
सीरीज "द रोडको खालीपन": अभिनेताहरू, भूमिकाहरू, छोटो कथा
Erza Scarlett र Gerard Fernandez
को सतह degrease? कारहरुको लागि Degreaser
आफुको लागि पानी फिल्टर कसरी बनाउने?
कसरी आमा र बच्चाको लागि पीडारहित स्तनपान देखि निहत्था बनाउन
नुनीन मा मैकेरल Salting। घरेलू टिप
मासु संग gravies कसरी तयार गर्ने?
एक colonoscopy के छ, प्रक्रिया को लागि तैयारी,
अन्ना Akhmatova गरेको "Requiem": उत्पादन विश्लेषण